ချောအိမာန် (မန္တလေး): ကွန်ဒိုအိပ်မက်
ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ကွန်ဒိုအခန်းလေးကို နေရာချင်းမလဲတဲ့ အမျိုးသမီးလေးကို လေးစားချီးကျူးပါတယ်။ ခင်သက်ပိုင်လို အလွယ်လိုက်သူတွေကတော့ နောက်ဆုံးမှာ သူ့လို ရလဒ်မျိုး ရတတ်တာ အသေအချာပါဘဲသင်ခန်းစာကောင်းလေး ပေးထားတဲ့ ဝတ္ထုလေးက ခေတ်အခြေအနေနဲ့တော့ ကွက်တိပါဘဲ
သင်ခန်းစာကောင်းလေးပေးသွားတဲ့ပို့စ်ပါ။ ငွေနဲ့သိက္ခာနဲ့ လဲသွားတဲ့သူတွေ.... အင်းးးးခင်မင်လေးစားလျက်
Hello,Actually I'm not qualified to comment on this post. But I'd like to say 'Hi' to you.Hope you remember me. I'm the one from 'Heaven's Net'. I like reading your novels.Good Luck!
ခေတ်ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ ၀တ္ထုကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပဲ ဆရာမရေ။အကြောင်းအရာလေးက ရိုးပေမယ့် ရေးသွားတာလေးက အဆုံးထိဖတ်ချင်စိတ်ဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းတယ်။သိပ်ကိုနှစ်သက်မိပါတယ်။ခင်တဲ့ဂျွန်မိုး